Puntland oo tababar u soo xirtay ciidamo loogu magac daray Galeyr (SAWIRRO) | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Puntland oo tababar u soo xirtay ciidamo loogu magac daray Galeyr (SAWIRRO)
Qardho (Halqaran.com) – Madaxweyne Ku-xigeenka dowlad goboleedka Puntland, mudane Axmed Cilmi Cismaan (Karaash) ayaa Arbacadii maanta Magaalada Qardho tababar ugu soo xiray ciidan cusub, oo ay yeelanayso Puntland.
Ciidamadan oo ka tirsan Daraawiishta Puntland ayuu muddo lix bilood ah, uu tababar uga socday Xerada Ciidamada Daraawiishta Puntland ee Xorgoble.
Ciidamadan oo la magac baxay Galeyr ayaa dhoola-tus ciidan ku soo bandhigay xerada ku taala Magaalada Qardho, ka hor intii aanu tababarka u soo xirin Madaxweyne Kugeenka.
Mr. Karaash ayaa boggaadiyay dhoola-tuska Ciidamada Galeyr, iyadoo dhinaca kalena uu shahaadooyin guddoonsiiyay.
Madaxweyne ku xigeenka Puntland ayaa xusay in tayeynta ciidamada iyo inay si joogto ah u hellaan mushaharaadkooda, ay tahay waxa ay ku guuleysatay maamulka uu hoggaamiyo, Siciid Cabdullaahi Deni.
Ugu dambeyn, wuxuu Axmed Karaash Ciidamada Galeyr kula dardaarmay in ay noqdaan kuwo, sida ay tahay u guta waajibaadka saaran.
Puntland oo tababar u soo xirtay ciidamo loogu magac daray Galeyr